Mashruuc laami loogu samaynayo magaalada Boosaaso oo maanata qallinka lagu duugay. – Radio Daljir
Bosaso,Feb 2 -Kulan balaaran oo ay isugu yimaadeen maamulka degmada Boosaaso,wasiiro katirsan dowladda iyo guddi ay ku midaysanyihiin ganacsato,maamulka degmada iyo aqoonyahano oo loo xilsaaray horumarinta degmada Boosaaso ayaa maanta kadhacay magaalada Boosaaso.
Ujeedka kulanka ayaa waxaa uu ahaa sidii laami loo saari lahaa waddo cabirkeedu yahay 1 km iyo laba boqol iyo konton mitir oo isku xirta garoonka diyaaradaha iyo Isgoyska Gaaca ee magaalada Boosaaso.
Duqa magaalada Boosaaso Xasan Cabdalle Xasan oo furay kulanka ayaa waxaa uu sheegay maamulkiisa inuu mudooyinkii ugu dambeeyay waday howlo lagu horumarinayo magaalada Boosaaso,laguna hagaajiyayna qaybo ka mid ah wadooyinka Boosaaso.
Waxaa uu sheegay horay magaalada inay uga bilaabatay mashruuc carro tuur ah,balse xiligaan loo gudbayo in laasmi la saaro qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada Boosaaso.
Shirkad fulinaysa mashruuc laamiga lagu saarayo wadadan muhiimka u ah magaalada Boosaaso ayaa la yiraahdaa El-gur,waxaana dhaqaalaha ku baxaya mashruucan horumarinta ka qaybqaadan doona dadwayanaha magaalada Boosaaso.
Wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan oo kulanka goob joog ka ahaa madax kascotay maamulka gobolka ayaa soo dhoweeyay talaabadan lagu horumarinayo magaalada oo ay ku tilmaameen mid shacabka looga baahanyahay inuu sii wado.
Shirkadda El-gur ee qandaraaska dhismo qaadatay ayaa balanqaaday muddo 29-cisho gudhood ah inay kusoo gabagabayn doonto inay laami saarto wadada isku xirta garoonka Boosaaso iyo isgooyska Gaaca ee bartmaha magaalada Boosaaso.